သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များမော်ကွန်းတိုက်၊ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ကျနော်တို့ပြီးနောက်-ပါတီများအတွက် 2017 NAB Show ကိုဖော်ပြထားခြင်းမထားဘူးဆိုရင်ကျနော်တို့ NAB ပြရန်နှင့်အတူဆက်စပ်ပျော်စရာ၏ကြီးမားသောအတုံးအထဲကထွက်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်း! အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြည့်ပိုမိုသောအချက်အလက်များများအတွက် NAB Show ကိုပါတီအသေးစိတျကို click အချို့သည်ပုဂ္ဂလိကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သကဲ့သို့, ဖိတ်ကြားချက်ကိုခြင်းဖြင့်သာလျှင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးဝန်ခံချက်တာဝန်ခံရှိသည်။ ဒါဟာသင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးပြေးစာရင်းနှင့်အရှိဆုံးပြည့်စုံပါ! ကျနော်တို့ ...
2016, 16 - broadcast မဂ္ဂဇင်း roving ရုပ်ရှင်သမားတွေ, လူမှုရေးမီဒီယာလွှမ်းခြုံနှင့် "တိုက်ရိုက်-ဘလော့ဂ်" ဧပြီလ 21 featuring ၎င်း၏ဝန်ထမ်းများမှတဆင့် 2016 NAB Show မှာအဓိကရှိနေခြင်းဖြစ်ရလိမ့်မည် Beat ။ ft ။ Lauderdale, FL (GCOMM) ဇန်နဝါရီ 5, 2016 - တိုက်ရိုက် NAB Show ကိုစတူဒီယို ONE ကနေအသံလွှင့်, ကြာသပတေးနေ့, ဧပြီလ 17st မှတဆင့်တနင်္ဂနွေဧပြီ 21th စသောအသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်းဟာအတူ Glow လိမ့်မယ် Beat ...
အဆိုပါအသံလွှင့်နဲ့ post အသစ်နှင့်ဆန်းသစ်သောထုတ်ကုန်များ & န်ဆောင်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုကုမ္ပဏီများမှ - အမြဲတမ်းသင်စတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ထဲမှာအကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဆောင်ခဲ့အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်းထို 2015 IBC ပြရန်ဖို့ "အသံလွှင့်, ဆုပေးပွဲ Beat '၏ပြန်လာကြေညာလိုက်ပါတယ် Beat -production စက်မှုလုပ်ငန်း။ ft ။ Lauderdale, FL (GCOMM) သြဂုတ်လ 3, 2015 "အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat" ကလမ်းကိုဦးဆောင်လမ်းပြဆက်လက် ...
အွန်လိုင်းထုတ်ဝေအကြောင်းအရာဖန်တီးမှု, content တွေကိုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အကြောင်းအရာများပေးပို့စျေးကွက်ဖြတ်ပြီးစာဖတ်သူချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက် - မဂ္ဂဇင်းအဖွဲ့ Ft Beat အဆိုပါအသံလွှင့်ဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းဝါရင့်ကထပ်ပြောသည်။ Lauderdale, FL (GCOMM), မတ်လ 19, 2015 - အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း, တစ်ဦးဦးဆောင်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးမီဒီယာထုတ်ဝေစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးအခွက်တဆယ်အချို့ကိုဆွဲဆောင်ခြင်းဖြင့်ယင်း၏ကြယ်တိုးတက်မှုနှုန်းဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ် Beat ။ အဆိုပါမဂ္ဂဇင်းက ...
ထုတ်လွှင့် @Teradek #IBCShow ကနေအမ်စတာဒမ် @IBCShow အတွက် LIVE Beat
အောက်ပါအတွက်အချိန်ဇယားနှင့် this post ရဲ့အောက်ခြေမှာခြင်းကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့ကြည့်ပါ! သငျသညျစတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ထဲမှာအကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ယူလာရန်ကျူးလွန်, အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း - www.broadcastbeat.com - Teradek မှတဆင့်တိုက်ရိုက်အမ်စတာဒမ်အတွက် Show ကိုကြမ်းပြင်ကနေထုတ်လွှင့်က The 2014 IBC Show ကို၎င်း၏လွှမ်းခြုံကြေညာ Janet အန်းအနောက် featuring ဖြစ်ပါတယ် LIVE ။ ...
အသံလွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်းကြေညာ - #IBC2014 ဘို့အချိန်မှာတော့
သငျသညျစတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ထဲမှာအကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ယူလာရန်ကျူးလွန်, အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း - www.broadcastbeat.com - သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးထုတ်ဝေ IBC Edition ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ဝေမှုကြေညာတာဖြစ်ပါတယ် - အဲဒီ 2014 IBC ပြရန်ကာလအတွင်းအသိပေးနှင့် In-touch နဲ့သငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်။ ft ။ Lauderdale, FL (GCOMM) စက်တင်ဘာလ 11, 2014 - "အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat" ဟုအဆိုပါပြိုင်ဆိုင်မှုထိပ်ဆုံးမှဆက်လက်တာဖြစ်ပါတယ် ...